AmaKristu athetha ngokumamela uThixo, kodwa oko kuthetha ntoni? Kukho iindinyana zeBhayibhile xa uva uThixo kunye nendlela ilizwi lakhe elichaphazela ngayo ubomi bethu. Xa sithetha ngokuva uThixo, abantu abaninzi banomfanekiso wesiqithi esivuthayo okanye ilizwi elibiza ezulwini. Nangona kunjalo kukho iindlela ezininzi uThixo athetha ngazo kwaye uqinisa ukholo lwethu:
UThixo Uthetha Nathi
UThixo uthetha ngamnye kuthi ngeendlela ezininzi.
Enyanisweni, uMoses unenhlanhla ngokwaneleyo ukufumana isiqithi esivuthayo. Akusoloko kuyenzeka ngaloo ndlela kuthi ngamnye wethu. Maxa wambi simva eentloko zethu. Ngamanye amaxesha kunokuvela kumntu uthetha nathi okanye ivesi eBhayibhileni elithatha iso lethu. Ukuphulaphula uThixo akufanele kuphelelane nendlela yethu yokucinga kuba uThixo akanakulinganiswa.
Izimvu zam ziva ilizwi lam, kwaye ndiyazi, kwaye ziyandilandela. (NASB)
Iindlebe zakho ziya kuliva ilizwi emva kwakho, lisithi, "Yile ndlela, hamba kuyo," xa uphendukela ngakwesokudla okanye xa ujikela ngakwesobunxele. (ESV)
UMoya ubonisa okunyanisekileyo kwaye uza kuza akhokele kwinyaniso epheleleyo. UMoya akazithethi ngokwakhe. Uya kukuxelela kuphela oko akuvile kum, kwaye uya kukuxelela ukuba kuya kwenzeka ntoni. (CEV)
Yeremiya 33: 3
Ndibuze, kwaye ndiza kukuxelela izinto ongaziyo kwaye awukwazi ukuzifumana. (CEV)
2 Timoti 3: 16-17
Isibhalo sonke siphefumlelwe nguThixo kwaye sinceda ekufundiseni, ukukhuza, ukulungisa nokuqeqesha ngobulungisa, ukuze umkhonzi kaThixo axhotyiswe ngokupheleleyo kuyo yonke imisebenzi emihle.
Hebhere 1: 1-5
Kwixesha elidlulileyo, uThixo wathetha ookhokho bethu ngabaprofeti ngamaxesha amaninzi nangeendlela ezahlukeneyo, kodwa kule mihla yokugqibela uthethe kona ngoNyana wakhe, ammisela ukuba abe yindlalifa yezinto zonke; . UNyana ungukukhanya kozuko lukaThixo kunye nokubonakaliswa kwakhe ngokuqinisekileyo, ukugcina zonke izinto ngegama lakhe elinamandla.
Emva kokumisela ukuhlanjululwa kwezono, wahlala phantsi ngakwesokunene soBungangamsha ezulwini. Ngoko waba mkhulu kunezithunywa zezulu njengoko igama elilizuze lona liphezulu kunabo. (NIV)
Ukholo Nokuva UThixo
Ukholo kunye nokuvalelwa kukaThixo kuyahamba. Xa sinokholo, sikwazi ukuvula ukuva uThixo. Enyanisweni, siyakwamukela. Ukuphulaphula uThixo kuya kusiqinisa ngakumbi ukholo lwethu. Umjikelo owenza usomelele.
Nabani na onguThixo uphulaphule amazwi kaThixo. Kodwa awuphulaphuli ngenxa yokuba awunabo bakaThixo. (NLT)
Umoya wedwa unika ubomi obungunaphakade. Umzamo wabantu awufezekanga nto. Yaye kanye amazwi endikuthethile kuwe ngumoya kunye nobomi. (NLT)
Kodwa wathi, "Ngaphezu koko, abo babasiva ilizwi likaThixo baligcine!" (NKJV)
Kwabo abakhokelwa nguMoya kaThixo bangabantwana bakaThixo. (NIV)
Hebhere 2: 1
Ngoko ke kufuneka sihlawule ingqwalasela, ngoko ke, kwizinto esiziveleyo, ukuze singasuki. (NIV)
INdumiso 85: 8
Makhe ndive oko uThixo akuthethayo, kuba uya kuthetha uxolo kubantu bakhe, kubangcwele bakhe; kodwa makungabuyi kububuwula. (ESV)
Funda Amaqiniso NgamaLwandle amakhulu kunawo wonke eMhlabeni